Ny henihenin-tsira manan-tantara an’i Anfeh ao Libanona rahonan’ny toeram-pitsangatsanganana iray hafa koa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jona 2018 9:14 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, Italiano, Français, عربي, English
Sary avy eny an'habakabak'i Anfeh. Sary avy amin'i ‘Lebanon Untravelled’. Nahazoana alalana.
Taorian'i Ramlet el Bayda ao Beirota, morondrano vatolampin'i Kfarabida ao Batroun ary ny seranan-tsambon'i Adloun fahiny, ny henihenin-tsira manan-tantaran'i Anfeh indray no mety ho lasibatra farany amin'ny fanomezana ho an'olon-tsotra ny morontsirak'i Libanona.
Tamin'ny 16 Mey 2018, folo andro monja taorian'ny nanatontosana ny fifidianana manerana ny firenena voalohany tao anatin'ny sivy taona, dia notoherin'ny Vaomiera Ambony misahana ny Drafi-Pandaminana Ambonivohitra ny volavolam-pananganana toeram-pitsangatsanganana goavana (an'olon-tsotra) iray ao anatin'ny lazaina ho ‘Natour Development’ ao Anfeh, ka lazainy ho antony ny maha-zavadehibe ara-tontolo voajanahary, ara-tontolo iainana, ara-tantara ary ara-kolontsaina ny saikanosin'i Deir El Natour izay heverina fa hananganana ilay toeram-pitsangatsanganana.
Saingy feno fisalasalana ny olona raha hanaiky izany fanirian'ny Vaomiera Ambony izany ny governemanta. Efa misy sahady ny filazana ho fisian'ny fifandirana amin'ny fanapahan-kevitra ijoroan'ny governemanta.
Tany amoron-dranomasina azon'ny olona rehetra idirana manodidina ny 70.000 metatra toradroa eo no hatolotra ireo mpiahy tena mpanangana fotodrafitrasa hananganana toeram-pitsangatsanganana, izay mety ahitana efitra fandraisam-bahiny, trano fitazatazanana, bars sy nightclubs, toeram-pilalaovana golf ary marina iray ho ao anatin'ny tetikasa goavan'ny 81 hekitara.
Ny ‘Natour Development’ tantanin'ny Al Dair Holding, anatin'ny vondrona Malia, sady izy no tompony, dia tetikasan'i Mohammad Safadi, mpikambana parlemantera teo aloha, sy i Maurice Fadel (efa maty), ary i Jacques Sarraf tompon'orinasa.
Araka ny nohazavain'i Timour Azhari tao amin'ny gazety iray mivoaka isan'andro amin'ny teny anglisy ‘The Daily Star’, Ny anaran-tetikasa dia nalaina avy amin'ny anarana Deir al-Natour, monasitera Grika Katolika izay niorina teo amin'ny tanjona voahodidina honahonan-tsira sy zavamaniry zanatany tsy fahita any an-kafa.
Pikantsarin'ny tranonkalan'ny Malia Group
Nanambara i Jad Tabet, filohan'ny holafitry ny injeniera, fa mandika ny Drafitry ny governemanta Ankapobeny Fanajariana ny tany libaney nolaniana tamin'ny taona 2009 ity tetikasa ity, izay nanamarika ity faritra ao Anfeh ity ho maha-“tsy manam-paharoa” eo amin'ny sehatry ny haiaina sy eo amin'ny sehatry ny kolontsaina ka tokony hotandrovina.
Vakio: Mpikatroka ao Beirota manomboka andro ijerena ny vakoka hiarovana ireo toerana manantantara tandindonin-doza [mg]
Nosoritany ihany koa fa tsy mbola nankatoavina ilay tetikasa, ka mbola azo toherina tsara. Tao amin'ny fanehoan-kevitra iray tao amin'ny pejy Facebook “Diaries of the Ocean”, nanoratra izy:
Mbola afa-miady isika hampitsaharana ny tetikasa. Terena ny Fiangonana Ôrthôdôksa tompon'ny toerana!
Faritra manandanja ara-haiaina sy ara-kolontsaina
Miorina eo amin'ny saikanosy manana halavana 400-metatra manakaiky ny tanànan'i Tripoli avaratra, tanàna fahagola amoron-dranomasina ny toerana arkeolojikan'i Anfeh, izay efa nataon'ny Fenisiana ho toerana fananganan-tsambo.
Hita amin'ny sisa tavela tao Anfeh fa farafahakeliny efa nonenan'olombelona 3000 taona izy. Efa hita tao amin'ny faritra ny manda fenisiana sy romana, fikoseham-boaloboka, rarivato môzaika, ary lasapely roa niorina tamin'ny taonjato fahafito.
Tamin'ny taona 2015, misy ekipa iray avy tao amin'ny Oniversiten'i Balamand, izay manana toby ao Koura tsy lavitra an'i Anfeh, namoaka ity lahatsary (amin'ny teny anglisy) manaraka ity tao anatin'ny fanantenana hampiroborobo ny fizahantany maitso lovainjafy ao amin'ny faritra:
Nisy tatitra navoakan'ny Greenpeace tamin'ny taona 2010 nanoso-kevitra ny hampidirana ny saikanosin'i Anfeh ao anatin'ny tambajotra valan-javaboary an-dranomasin'i Libanona noho ny hasarobidiny ara-boajanahary. Novolavolain-dry zareo ny hamerana ny zavatra ataon'olombelona eny ho amin'ny fanaraha-maso ara-tsiantifika sy ankisitrika ary akilentika ambany ranomasina.
Mbola misy eo amin'ny faritra ny rafi-piainana ara-boajanahary mampiavaka ny toerana, ankilan'ny henihenin-tsira ampolony taona, sisarindrina fahagola ary singa ara-kolontsaina maromaro. Miaraka amin'ny nosy Gozo ao Malta, Anfeh no manana henihenin-tsira ela indrindra ao Mediterranée.
Efa nandeha ampolony taona vitsivitsy izao ny antso ho fiarovana ny morontsirak'i Anfeh sy ny indostirian'ny fitrandrahana sira ao aminy.
Talohan'ny taona 1970s, i Anfeh no mpamokatra ny ankamaroan'ny siran'i Libanona. Manombana ny Kaominin'i Anfeh fa manodidina ny 70 isanjaton'ny fianakaviana ao an-toerana no mivelona amin'io sira io.
Vola azo avy amin'ny famokarana sira no ahafahan-dry zareo manangan-trano sy mandefa ny ankizy any an-tsekoly. Saingy nihena dia nihena ny tombombarotra azon-dry zareo avy aminy hatramin'ny taona 1990s, rehefa nofoanan'ny governemanta libaney ny hetra amin'ny sira afarana avy any ivelany ary lasa lafo loatra ny masonkarenan'ny sira libaney ahafahany mifaninana.
Mitantara i Azhari tao amin'ny Daily Star fa efa nisy mpikatroka mpiaro ny tontolo iainana niezaka hamaha izany olana izany.
Hafez Jreij, mpikatroka mpiaro ny tontolo iainan'i Anfeh sady efa mpiasa amin'ny henihenin-tsira taloha, no niezaka hitahiry ny fomba fiasa hatramin'ny nandrenesany siosio ny tetikasa Natour tamin'ny taona 1999.
Niaraka tamin'ny vondrona mpampianatra oniversite sy mpikatroka izay nantsoiny hoe “Revolisionan'ny sira” i Jreij no niezaka hametraka fitoriana tany amin'ny fitsarana mba hanakanana ny tetikasa tsy hivoaka ny tany.
Mpikatroka sy vondrona mandala ny tontolo iainana maro, anisan'izany ny T.E.R.R.E Liban, Lebanon Eco Movement ary ny Diaries of the Ocean, no niezaka nandrisika ny governemanta libaney tsy hankatoa io tetikasa io ary hitandro ny faritra sy ny kolontsaina sy tontolo iainana tsy manampaharoa ao aminy.
Nilaza i Paul Abi Rashed, filohan'i Lebanon Eco Movement sady mpanorina ny T.E.R.R.E Liban:
Io no toerana sisa farany madio ahafahanay mitondra ny zanakay hilomano… Ary manana fanapahan-kevitra manatantara mila atao ny governemanta amin'ny fitsipahana ny fandrakofana simenitra ny tanintsira amin'ny hoe fampandrosoana ara-pananana mifaka #SaveAnfehSaltFlats.
Nandrisika hetsika hanakanana ny tetikasa ihany koa ny Beirut Heritage Community:
Manao antso ny Beirut Heritage Community amin'izay rehetra manana andraikitra, indrindra ireo minisitra, tsy hankatoa tetikasam-pizahantany ho atao eo ambonin'ny tanintsiran'i Anfeh manatantara, izay ho atolotra amin'ny fotoam-pivorian'ny governemanta amin'ny alatsinainy. Efa notsipahin'ny Vaomiera Ambony misahana ny Drafi-Pandaminana Ambonivohitra ity tetikasa ity ary nahazo fanakianana avy amin'ny sampanasa rehetra misahana izany.
Misy aza ny politisiana no manana izay lazainy ihany koa amin'ny fanapahan-kevitra farany nataon'ny governemanta, toa an'i Walid Joumblatt mpikambana ao amin'ny parlemanta manontany ny antony nandraisana izany fanapahan-kevitra izany
Dia tahaka izay fotsiny, natao tsipika tamin'ny penina fotsiny nandritra ny filankevitry ny minisitra ny namafana ny tanintsiran'i Anfeh manantantara ao Libanona avaratra hanaovana tetikasam-panorenana izay tsy iraharahian'ny tompony akory izay lanja ara-tantara sy ara-bakoka. Efa mitranga koa ny toy izany amin'ireo fanorenana manantantaran'i Beirota sy saika hita na aiza na aiza.
Tokony homarihana fa ny siokan'i Joumblatt dia efa mametraka sahady fa efa nanaiky ny tetikasa ny governemanta, nefa tsy mbola tapaka izany tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity.
Ny Andininy faharoa 2 amin'ny Didy faha-144 amin'ny lalàna mandamina ny fananantany amoron-dranomasina ao Libanona hatramin'ny taona 1925 no mametraka fa ny morondranomasina hatramin'ny lavitra indrindra tratran'ny onjan-dranomasina mandritra ny ririnina, na torapasika io na vatolampy dia heverina ho fananam-bahoaka.
Vakio: Miatrika fahapotehan'ny sehatra maitson'ny tanàna iray hafa ny kaominin'i Beirota [mg]
Na dia eo aza izany lalàna izany, dia miova ny didy hitsivolana ary ny fahabangana ara-pitsarana no nahafahana nanao fanorenan-trano hatrany amin'ny morondranomasina libaney.
Tao amin'ny antsafa iray nifanaovana tamin'i Azhari i Tabet no nilaza fa:
Ny 20 isanjaton'ny morondranomasina ihany no azon'ny olona idirana”, hoy i Tabet – izany hoe 45 kilaometatra amin'ny morondranomasina libaney mirefy 225 kilaometatra.